Ufikelele ngcono kwesinye isiPhumo soNyaka esiPhakamileyo ngo-2016
ngomphathi ku 18-03-12
U-2016 ngomnye unyaka wokuvuna weMoto eNgcono, ngenxa yenkxaso yabathengi kunye nabasebenzi abangcono 'abasebenza nzima. Sifumana ukukhula kunye nenkqubela phambili kunyaka ngamnye. Iziphumo zonyaka ngo-2016 zizigidi ezi-2.9 zeeseti, iiseti ezingama-450,000 zonyuke xa kuthelekiswa neeseti ezizizigidi ezingama-2.45 ngowama-2015. KuNyaka oMtsha ka-2017, sizaku ...
Nge-8 kaJuni, ubuNjineli boMbane ne-Automation Injineli u-Li Dongwei osuka e-Ohio State University e-USA watyelela i-Shandong Better Motor Co, Ltd. u-Li Dongwei, umphandi osele egqibile ukusukela kwelebhu yezesayensi yombane e-Ohio State University e-USA, onesidanga sobugqirha esiphindwe kabini kwiinjineli zombane. ..
Iqela leprojekthi yeprojekthi yobunjineli beenkqubo zolwazi kwi-Better Motor yasekwa
NgoJuni 26, iqela leprojekthi yeenkqubo zobunjineli zeprojekthi yobunjineli engcono kwiZimoto ezingcono yasekwa. I-Shandong Sanjiang Electric Engineering Co., Ltd ijongene nokuyila nokusebenza kwale projekthi. Kucwangciselwe ukwenza umsebenzi wetyala ekupheleni kwe-Sep. Ngoku i-Sanjing Electric Injineli ...